Alexis Sanchez iyo Chris Smalling waa sidee xiriirka ay WhatsApp-ka kula leeyihiin xiddigaha kooxda Man United tan iyo markii ay ka tageen Old Trafford? – Gool FM
(Manchester) 29 Sebt 2019. Alexis Sanchez iyo Chris Smalling ayaa go’aanno kala duwan ka qaatay qorlka Whatsapp-ka ee ay ku sheekeystaan xiddigaha kooxda Manchester United tan iyo markii ay u dhaqaaqeen dalka Talyaaniga.
Wargeyska The Sun ee dalka Ingiriiska ayaa daabacay in Sanchez uu u muuqdo mid xiriirka u jaray dhammaan xiddigaha kooxdiisa Manchester United tan iyo markii uu u wareegay dalka Talyaaniga.
Xiddiga xulka qaranka Chile oo haatan 30-sano jir ah ayaa heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah ugu wareegay kooxda Inter Milan kaddib markii uu 18-bilood oo aan u fiicnayn ku qaatay garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto Man United.
Dhinaca kale daafaca Chris Smalling oo isaguna ka tagay Masraxa riyada kaasoo isna amaah ku jooga naadiga AS Roma ee dalkaasi Talyaaniga ayaa ah xiddiga kaliya ee WhatsApp-ka kula sheekeysta ciyaartoyda kale ee kooxda Manchester United.
Dhaliyaha xulka Chile ayaa la soo warinayaa inuu xitaa ahaa kaligiis noole markii uu joogay Old Trafford, waxaana warbixinta lagu sheegay inuusan kooxda reer England saaxiibo badan ka sameysan.
“Waa sida uusan waligiisba halkaan soo marin” sidaas waxaa Wargeyska The Sun u sheegay ilo wareedyo ku sugan kooxda Man United oo ka hadlayey aamusanaanka Sanchez.
Sanchez ayaa safka hore ee Inter Milan lagu soo bilaabay xalay markii ugu horreysay, waxaana uu shabaqa soo taabtay kulankii ay kooxdiisu 3-1 uga badisay Sampdoria inkastoo uu kaaska casaanka ah loo taagay.
Kooxda Inter Milan ayaa wada badisay dhammaan lixdii kulan oo ay ciyaareen horyaalka Serie A kal ciyaareedkan, waxaana ay labo dhibcood ka sarreysaa Juventus oo ku jirta kaalinta labaad, laakiin nasiib-darro Sanchez ayaa ganaax ku seegi doona kulan adage e Inter Milan ay isbuuca soo aaddan la dheeli doonto difaacdayaasha horyaalka Talyaaniga ee Juve.
Safafka ay ku soo geli karaan Kooxaha Man United iyo Arsenal kulanka habeen dambe ka dhici doona garoonka Old Trafford